देउवाको दावी : ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नक्सा छापेेको हो – NagrikPath
देउवाको दावी : ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नक्सा छापेेको हो
७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका छन् ।
नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतले आफ्नो नक्सामा ‘काली’ लेखिएको पदावली हटाएर संशोधित नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । तर, त्यसलाई पनि नेपालले मानेको छैन ।
ओलीसँग भित्रीरुपमा सल्लाह गरेरै भारतले नक्सा छापेको हो, यो त्यसै छाप्छ ? ओलीको सहमतिबिना छाप्नै सक्दैन भारतले ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको यो आरोप चुनावी भाषण मात्र हो कि केही यसमा तथ्य पनि छ ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘प्रधानममन्त्री भइसक्नु भएकाले सभापतिले केही सूचनाका आधारमा बोल्नुभएको होला । यदि यो गलत हो भने सरकारले सावित गरोस् ।’
नेकपा भन्छ : भ्रामक प्रचार
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने देउवाको आरोपको खण्डन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा हामी सरकारको साथमा छौं भनेका देउवाले नै भ्रमक प्रचार गर्नु दुःखद भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी प्रकाशले बताए ।
यसले देशलाई अहित गर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो देश एकतावद्ध भएको बेला आएको यो अभिव्यक्तिले देशलाई विभाजित गर्ने काम गर्छ’ उनले भने । अनलाइन खबर
Previous Previous post: परासी मेलामा दर्शकको ओईरो, ज्योति मगर र सुनिल पण्डितले मच्चाए धमाका (भिडियाे सहित)
Next Next post: यस्तो छ प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद्को महत्वपूर्ण ७ निर्णय